Daawo Muqaalka: Arday u dhintay Imtixaan dartiis markii uu iska tuuray taallada ugu dheer magaalada Qaahira | Allbanaadir
Daawo Muqaalka: Arday u dhintay Imtixaan dartiis markii uu iska tuuray taallada ugu dheer magaalada Qaahira
Arday Masaari ah ayaa toddobaadkan ku dhaqaaqay arrin naxdin leh kadib markii uu iska tuuray taallada ugu dheer dalka Masar ee loo yaqaan Burj-Alqaahira ee caasimadda dalkaasi.
Wiilkan oo 19 sano jir ahaa, magaciisana lagu sheegay Jarjis ayaa la sheegay inuu isu dilay kadib markii uu ku fashilmay waxbarashada oo uu xalin waayey maado ka mida kuwa dugsiga sare, isagoo ka baqay inuu ku xanaaqo aabihii oo doonayey inuu galo kuliyaddaha sare ee Jaamacadaha caanka ah ee dalka Masar.
HALKAAN RIIX KA DAAWO MUQAALKA
Wiilka is dilay ayaa iska tuuray taallada Burj -Alqaahira oo dhererkiisu gaarayo 187 mitir, kana kooban 16 dabaq. baaritaan ay sameayaan booliska Qaahira ayaa lagu ogaaday inuu wahadal dhex maray ciidamada amniga, isagoo u sheegay inuu aad uga xun yahay, kana niyad jabay imtixaan maado uu xalin waayey leyliyadeeda, isla markaana uu doonayo inuu hawo qaato, wuxuuna weydiiyay sababta uu ciladeysan yahay Telescope taallada saarnaa, kadibna markii uu mashquuliyey uu si degdeg ah isaga tuuray halkaasi.
Wiilkan oo arrintiisa si weyn looga hadal hayo dalka Masar ayaa ku dhibanaa maadada luqada English-ka, isagoo muddo sanad ah ku sugnaa xaalad nafsi ah oo isku buuq ah, wuxuuna sheegay aabihii inuusan ku ogeyn xaalad halis ah, balse uu u sheegay inuu imtixaanka aad uga cabsado siiba luqada English-ka.